Ahoana ny fahazoana miditra amin'ny fananana rakitra ao amin'ny macOS | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fahazoana miditra amin'ny fananana rakitra ao amin'ny macOS
Files, na inona na inona endriny, izy ireo dia mihoatra ny anarana, ny fanitarana ary ny toerana iainany, fampahalalana izay ho fantatsika haingana nefa tsy mila mampiditra menio akory. Miankina amin'ny karazana fisie, raha mila mahafantatra fampahalalana misimisy kokoa isika toa ny vahaolana amin'ny sary na horonan-tsary, rehefa noforonina izy io na rehefa novaina, izay ahafahana misokatra ... tsy maintsy miditra amin'ireo fananana isika.
Ny fananan'ny fisie dia tsy mamela antsika hahafantatra hoe inona ny habeny, fa koa, manolotra vaovao bebe kokoa ho antsika izay mety hahasoa arakaraka izay kasainay hatao amin'ilay rakitra. Raha te-hiditra amin'ny fananan'ireo rakitra izay efa notehirizinay tamin'ny solo-sainay izahay dia manome fomba roa asehonay anao etsy ambany ny macOS.
Ny macOS dia mamela antsika hiditra mivantana amin'ny fananan'ny rakitra amin'ny fomba mitovy amin'izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny Windows, mametraka ny totozy eo ambonin'ny fisie, manindry ny bokotra ankavanana ary misafidy Mahazoa vaovao. Amin'izay fotoana izay dia hiseho ny varavarankely miaraka amin'ny mombamomba ny rakitra rehetra.
Raha te-hahazo fampahalalana bebe kokoa isika dia tsy maintsy manindry ny lohatenin'ny fizarana tsirairay, satria amin'ny maha-teratany azy dia esorina ireo mba tsy handany toerana be eo amin'ny efijery.
Ny fomba hafa anananay mba hahalalana hoe inona ny fananan'ny rakitra ao amin'ny Mac dia amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana fitendry, fomba haingana kokoa. Raha te-hahazo vaovao momba ny fisie iray dia tsy maintsy mankany amin'ilay fisie resaka ihany isika ary tsindrio CMD + i.
Amin'izay fotoana izay dia hiseho ny fikandrana vaovao fampahalalana momba ny rakitra rehetra, mampiseho ny fampahalalana mitovy amin'ny hoe niditra tamin'ny alàlan'ny fomba voalohany nasehoko anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fahazoana miditra amin'ny fananana rakitra ao amin'ny macOS
Manaova kajy matematika amin'ny fahasarotana rehetra amin'ny Fractions Pro
vGuru Video Player, tsy misy afa-tsy 1 euro